TurnKey Linux: The Virtual Device Library | Avy amin'ny Linux
Amin'ny fotoana aiza virtualization y docker no tena mpitaingin-tsoavaly, zava-dehibe ny mahatadidy ny fisian'ny tetikasa iray manana tantara lava antsoina hoe TurnKey Linux, izay mizara fitaovana virtoaly maimaim-poana izay mamela ny fampiharana (turnkey) sehatra teknolojia amin'ny milina virtoaly, ny rahona na LiveCD, ao anatin'ny minitra vitsy.
1 Inona no atao hoe fitaovana virtoaly?
2 Inona no atao hoe TurnKey Linux?
3 Fitaovana TurnKey Linux
4 Ahoana ny fiasan'ny TurnKey Linux?
5 Famaranana amin'ny TurnKey Linux
Inona no atao hoe fitaovana virtoaly?
Un fitaovana virtoaly dia fitaovana io mialoha fampidirana, mahaleo tena rafitra, izay miorina amin'ny alàlan'ny fampifangaroana fampiharana (oh: WordPress) miaraka amin'ny rafitra fiasa voaomana hihazakazaka amin'ny alàlan'ny fitaovana maoderina na milina virtoaly (oh: VMWare, VirtualBox, Xen HVM, KVM, EC2).
Inona no atao hoe TurnKey Linux?
Izy io dia tranomboky malaza miorina amin'ny Debian, izay vondrona manatsara ny sary avy amin'ny rindranasa loharanom-baovao misokatra izay efa napetraka mialoha sy namboarina mba hapetraka ao anatin'ny minitra vitsy, izany hoe, misaotra an'i Turnkey afaka mankafy fampiharana isan-karazany isika nefa tsy mandalo ny fizotra sarotra amin'ny fametrahana, ny fikajiana ary ny fametrahana.
Ity fitaovana ity dia ahafahantsika mitsitsy fotoana sy vola, manome antsika fikirana miaraka amin'ny fanohanana malalaka ihany koa izy, azo antoka sy mora tazonina.
TurnKey Linux havaozina ho azy isan'andro izy miaraka amina patch patch ary namboarina miaraka amin'ny loharano misokatra, noho izany dia manana dingana mangarahara 100% isika, tsy misy varavarana ambadika, fahazoan-dàlana mametra na fetra miafina. Midika izany fa tsy misy fiankinan-doha amin'ny mpamatsy.
Ny fampiasa mahazatra dia misy fitaovana Backup / Restore and Migration, tontonana fanaraha-maso tranonkala, ary fanaraha-maso fametrahana amin'ny alàlan'ny fanairana mailaka tsy voatery.
Fitaovana TurnKey Linux
Mamela anao hametraka fampiharana maherin'ny 100 maimaimpoana ao amin'ny rahona Amazon EC2, milina virtoaly na liveCD, ao anatin'ny minitra vitsy.
Easy, mandeha ho azy backups amin'ny famerenana amin'ny laoniny haingana.
Fampiharana zaraina amin'ny tontolo maivana, kely, haingana ary mora ampiasaina.
Milamina sy mora tazomina izy io, miaraka amin'ny fanavaozana isan'andro izay misy ny patch farany azo antoka.
Natsangana sy nosedraina fiaraha-monina.
Fanaraha-maso ny rafitra miaraka amin'ny fanairana.
Fampidirana mandeha ho azy amin'ny Amazon EC2.
Miorina amin'ny Debian 8 ("Jessie") - Miaraka amin'ny fanavaozana ny fiarovana mandeha ho azy mihoatra ny fonosana 37.500.
Manana antontan-taratasy malalaka azontsika idirana Eto.
Ahoana ny fiasan'ny TurnKey Linux?
Ny fomba tsotra indrindra hampiasana ny TurnKey Linux dia amin'ny alàlan'ny fampidinana ny sarin'ny fampiharana tiana haparitaka. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy miditra amin'ny tranonkala ofisialy https://www.turnkeylinux.org isika ary misintona ny sary amin'ny endrika tadiavintsika.
Ao amin'ny kinova ankehitriny TurnKey Linux 14.1 Betsaka ny rindranasa, mba hanazavana ny fomba fiasan'izy io, nalaiko ny fitaovana virtoaly Odoo. Azonao atao ny mahita amin'ny fisamborana, ireo endrika mifanentana isan-karazany, ho fanampin'ny angona fitantanana default.
Raha vantany vao alaina ny .ova, izay amin'ity tranga ity dia 724mb, dia miroso amin'ny fihazakazahana amin'ny Virtualbox izahay, avy hatrany dia mankafy fa efa napetraka mialoha ny zava-drehetra, hany ka mila manafatra ny fikirakira default.
Avy eo, arakaraka ny fitakian'ny programa dia hangataka angona vitsivitsy izy, izay saika mifandraika matetika amin'ny teny miafina mba hidirany amin'ireo serivisy ilaina.
Avy eo ny data dia hiseho ho afaka mifandray amin'ny rindranasa, izay azonao idirana tsy misy olana avy amin'ny solosainao loharano.
Toy izany koa, amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny url tsirairay dia hanana fidirana amin'ny tranokala misy fidirana root ianao, Webmin hitantanana ny fampiharana, Mpitantana iray izay mpitantana angon-drakitra, ankoatry ny afaka mampifandray amin'ny SSH / SFTP.
Administera Turnkey Linux
Famaranana amin'ny TurnKey Linux
Ho famaranana, Turnkey Linux dia fitaovana iray mahomby amin'ny fampifangaroana ny fahazavana, ny hafainganana, ny fampiasana azy, ny filaminana, ny fahatsorana amin'ny toerana kely. Ireo fitaovana virtoaly noforonina manodidina ity tetikasa ity dia tena tsara, mamela ny olona hampiasa fitaovana izay mety tsy hampiasain'izy ireo izy ireo noho ny fahasarotan'ny fikirakirana sy ny fametrahana azy ireo.
Ny maha-fitaovana mangarahara tanteraka anao dia mamela ny fampiasana azy ho azo itokisana indrindra, noho izany, manolotra ity fitaovana ity aho mba hizaha toetra ireo fampiharana ao anatin'ny fotoana fohy ary hametraka ireo fampiharana ao anatin'ny tontolon'ny famokarana misy fenitra avo lenta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » TurnKey Linux: Ny Virtual Library Library
Lahatsoratra tsara re izany!
bleson dia hoy izy:
Manana ampy hanamarinana amin'ny dockers aho, dingana xD
Mamaly an'i Bleson